Litholakale lingenamyocu ikhehla,80, ebelithunjiwe | News24
Litholakale lingenamyocu ikhehla,80, ebelithunjiwe
Mahikeng – Abesilisa abane abasolwa ngokuthumba ikhehla elineminyaka engu-80 ubudalaa bavele eNkantolo yeMantshi eMolopo ngoLwesihlanu.
Abasolwa, abaneminyaka ephakathi kuka-27 no-35 ubudala, baboshwe eTaung naseMahikeng ngoLwesithathu ngemuva kokuba owesilisa ethunjwe ngoLwesibili.
Okhulumela amaphoyisa aseNorth West uBrigadier Sabata Mokgwabone, esitatimendeni, uthe ukhehla lithunjwe lingaphandle komuzi walo oseGolfview, eMahikeng, ngoLwesibili ebusuku.
"Kusolwa ukuthi isisulu besifika ekhaya ngesikhathi imoto engaziwa ima phambi kwaso. Ebebesemotweni kuthiwa baphumile base belidonsela ngaphakathi emotweni, babaleka naye ngayo imoto,” kusho uMokgwabone.
OLUNYE UDABA: Inqatshelwe ibheyili indoda ebhekene nenqwaba yamacala okudlwengula
"Udaba lubikelwe amaphoyisa, aqalise uphenyo. Ngesikhathi kuqhubeka uphenyo kufone abasolwa bafuna ukukhokhelwa ukuze badedele isisulu.”
"Kube sekuqhubeka uphenyo olunzulu, nokuholele ekuboshweni kwabasolwa abathathu eTaung, nowesine eMahikeng.
"Isisulu naso sitholakale siphila, singalimele emzini oseTaung ngemuva kokuboshwa kwabasolwa abathathu.